यी हुन् भ्याट छल्ने ठूला ठग व्यापारिक समूहहरु,कस्ले कती ठगे ? –
यी हुन् भ्याट छल्ने ठूला ठग व्यापारिक समूहहरु,कस्ले कती ठगे ?
भ्याट छलीको सूचीमा निर्माण कम्पनी युनाइटेड बिल्डर्स पनि परेको थियो। सकुन्तलाल हिराचनको कम्पनी युनाइटेड बिल्डर्स पनि राजस्व छलीमा फेला परेको ठूलो कम्पनी हो। युनाइटेड बिल्डर्सबाट १३ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो। त्रिपुरेश्वरमा वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर बनाएको युनाइटेड बिल्डर्सले वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टर पनि बनाएको थियो। उसको ट्रेड टावर विवादको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा छ। नेपाललाईभ
« नक्कली भ्याट बिलबाट कर छली प्रकरण : भाटभटेनी लगायतले मुद्दा हारे, कर असुल्न सर्वोच्चको फैसला
मंगल ग्रहमा पाइएको मृत शरिरले वैज्ञानिकको उड्यो होस… »